जस्ले मानिसहरूलाई मास्क लगाउन यसरी अपिल गरे ,तपाईं अचम्म पर्नुहुनेछ(भिडियो) -जस्ले मानिसहरूलाई मास्क लगाउन यसरी अपिल गरे ,तपाईं अचम्म पर्नुहुनेछ(भिडियो) -
होमपेज / रोचक बिचित्र
जस्ले मानिसहरूलाई मास्क लगाउन यसरी अपिल गरे ,तपाईं अचम्म पर्नुहुनेछ(भिडियो)
५ श्रावण २०७७, सोमबार २०:०२ मा प्रकाशित
वाशिंगटन: कोरोना भाइरस महामारीको सामना गर्न सरकारी स्तरमा प्रयास भइरहेको छ। विश्वभरि प्रसिद्ध व्यक्तिहरूले पनि मानिसहरूलाई सचेत गराइरहेका छन्, ताकि भाइरसको फैलावट नियन्त्रण गर्न सकोस । अमेरिकी हास्य कलाकार चेल्सी ह्यान्डलर लामो समयदेखि यस अभियानसँग सम्बन्धित छ।
उनी लगातार केहि गरिरहेकी छिन्, मानिसहरूलाई मास्क लागू गर्न वा सामाजिक दूरीको उपाय अनुसरण गर्न प्रोत्साहित गर्न।
हालसालै ह्यान्डलरहरूले मास्कको प्रयोगलाई बढावा दिन केही गरे, जुन सोशल मिडियामा दृढतापूर्वक साझेदारी हुँदैछ। वास्तवमा, हास्य अभिनेता ह्यान्डलरले उनको एक भिडियो इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेको छ, जसमा उनी workouts गरिरहेको देखिन्छन्। विशेष कुरा के हो कि उनले यस समयमा लगाएको ब्रा कुनै मास्कबाट बनिएको हो।
भिडियोमा, ४५ वर्षीया चेल्सी स्नीकर, लेगिंग र दुई मास्कले बनेको ब्रामा व्यायाम गरिरहेको देखिन्छ। यस समयमा उनले मानिसहरूलाई मास्क लगाउन पनि अपील गरेका छन्। उनले भने, ‘प्रत्येक व्यक्तिले मास्क लगाउनु पर्छ।
मानिसहरू आफ्ना बच्चाहरूलाई फेरि स्कूल जान चाहन्छन्, तर हामी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दुर्व्यवहार गरिरहेका छौं। कृपया मास्क लगाउनुहोस्, जुन हामीलाई सुरक्षित राख्न एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ‘
A post shared by Chelsea Handler (@chelseahandler) on Jul 17, 2020 at 9:44am PDT
जब किसानको १०० किलो गोबर चोरी भयो, कारण जानेर तपाई छक्क पर्नुहुनेछ !
कोरोनाको डर : जब पैसा ओभन र वासिङ मेसिनमा हालियो
बाख्राले डिस्को डान्स गरेको भिडियो जब सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो
कर्मचारीको सानो गल्तीका कारण करोडपति बनेपछी…
मास्क नलागाई हिंड्नेलाई जहाँ ४ घण्टासम्म कक्षा दिइन्छ !
अब तपाईंलाई ‘नेकलेस’ले कोरोनाबाट बचाउँनेछ